Matte Madow Musqusha Qasabad Weyn Ku Fidday
Qasabadaha jikada, Dheriga buuxiya, Musqulaha Musqusha
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha / WOWOW Matte Black Foojiyaha Musqusha ee Labada Dhinac oo Fidsan
WOWOW Matte Black-Handle Gacanta Musqusha Qulqulka
qiimeeyay 4.87 out of 5 ku salaysan 23 ratings macaamiisha
(23 dib u eegista macaamiisha)
Dahaarka tuubbadu waa dabacsan yahay matte madow, oo laga yaabo inay dusha ka ilaaliso daxalka iyo miridhku.
Biyo dhuuqo & tuubada bixisa bullaacaddu waxay ku jirtaa xirmada. Hubso inaad u isticmaashid badeecada birta ah ee caymiska caafimaadkaaga
Xakamaynta Heerkulka - Kabadhada laba-gacmeed lagu xakameeyo Fudud ee heerkulka biyaha iyo durdurka biyaha si toos ah
Setup Easy - Dhammaan Qaybaha loo diyaariyey rakibidda ayaa sidoo kale lagu daray.
2321300B tilmaamaha rakibaadda
Xulo dal Åland IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaJacaylkuAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Saint Eustatius iyo SabaBosnia iyo HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilTerritory British Indian OceanBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileShiinahaChristmas IslandCocos (rukuucda) IslandsColombiaComorosCongo (Brazzaville)Congo (Kinshasa)Cook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuracaoCyprusCzech RepublicDenmarkJabuutiDominikaDominican RepublicEcuadorMasarEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaItoobiyaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFaransiis PolynesiaFaransiis Southern DhulalkaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiIsland maqlo iyo McDonald IslandsHondurasHong KongHungaryIcelandHindiyaIndonesiaIiraanCiraaqIrelandIsle of ManIsraa'iilItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyUrdunKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLubnaanLesothoLiberiaLiibiyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaIslands MarshallMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandKuuriyada waqooyiWaqooyiga MakedoniyaNorthern Mariana IslandsNorwayCumaanPakistanTerritory FalastiiniyiintaPanamaPapua New GuineaParaguayPeruFilibiinPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQadarReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé iyo PrincetonSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (qayb Dutch)Saint Martin (qayb Faransiis)Saint Pierre iyo MiquelonSaint Vincent iyo Grenadines ahSamoaSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaJasiiradaha SolomonSoomaaliyaKoonfur AfrikaSouth Georgia / Islands SandiwiijSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard iyo Jan MayenSwazilandIswidhanSwitzerlandSuuriyaTaiwanTajikistanTansaaniyaThailandTimor Leste-TogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurkiga oo Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited Kingdom (UK)United States (US)United States (US) Islands Fogfog YarUruguayUzbekistanVanuatuVaticanVenezuelaVietnamIslands Virgin (British)Islands Virgin (US)Wallis iyo FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
3 Godadka Mount Ballaaran ee Musqusha Qasabada 2321300B-AMUS: masaafada la hagaajin karo ee udhaxeysa 6 '' - 14 ''; Cabirka daloolka: 32 - 38 mm / 1.26 - 1.5 ''
Tiknolojiyadda Degdegga ah ee Isku-xidhka Hal-abuurka leh: fududahay inaad adigu iska rakibto adigoo aan tuubbiile ahayn, la imow kulanka bullaacadda soo baxa. Kaydso QALBINTA KHATARTA EE QIIMAHA BADAN EE WOWOW FAUCET
Qubeyska 2-Gacanta leh ee Gacanta Qubeyska: dusha gaarka ah ee dusha sare ee madow, mid caadi ah oo fudud, iska caabin ah burburka iyo xumaanta isticmaalka maalinlaha ah, oo ku habboon guryaha kirada ah, guryaha la kireysto, abaarta, faloolka, isticmaalka ganacsiga, hoteel
Biyo-xidheenno bilaash ah oo ah Biyo-bilaash ah: Fiijinta saqafka sare ee NSF dhoobada dhoobada iyo biyo-badbaadinta ABS ayaa xaqiijinaya inaysan lahayn liigitaan iyo hoggaan, dhinaca kale si tartiib tartiib ah, qulqulka biyaha oo deggan oo ay gacanta ku hayaan laba gacan-qabad leh dadaal yar
CAYMISKA LIFETIME oo ay la socoto taageerada Macaamiisha: Waxaa daboolay 90-maalmood oo soo laabasho lacag la’aan ah iyo dammaanad qaadka nolosha! FADLAN LA XIRIIR EMAIL❤service@wowowfaucet.com
SKU: 2321300B-AMUS Categories: Qubeyska Musqusha, Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha Tags: 8 inji, Black, Daadi
qiimeeyay 5 out of 5
Waxaan iibsaday qasabadaha Delta iyo Phisher kahor qiima sare. Wax soo saarka WOWOW waa wax aad uga badan inta aan ka filayo tayada, sahlanaanta rakibida iyo qiimaha lacagtayda. Waxay umuuqataa wax cajiib ah musqushayada cusub ee musqusha. Xitaa baakaduhu waa heer sare. Waxaan jecelahay o-ring-yada lagu dhejiyo salka gacmaha iyo qasabada si looga hortago daadashada. Tuubbada ku xirnaanta dabacsan ee la socota sidoo kale waa fiilo oo lagu ciyaaro iyada oo aan wax daadad lahayn. Ma sameeyo dib u eegis badan oo badeecadeed laakiin aad ayaan ugu qancay sheygan oo aan moodayay inaan kula wadaagi doono.
Waxaan dhawaan dib-u-habeyn ku sameeyay musqusha oo ay ku jiraan inaan ku beddelo saxankeyga hore ee musqusha iyo kabadhkeyga oo leh saxan qurxoon laakiin xoogaa dib u celinaya. Tani waxay u baahan tahay qasabado cusub oo baahsan.
Dib-u-habeynta awgeed, mar dambe ma aan haysan saxanka musqusha oo shaqeeya. Sidaa darteed, maadaama aan u baahanahay qasabadaha cusub isla markiiba, waxaan baaray bakhaaradayda qalabka guryaha, oo ay ku jiraan dukaamada silsiladaha waaweyn. Waan la yaabay oo aan ka niyad jabay taas, kaliya maahan inay heystaan ​​xulasho aad u kooban oo ah qasabadaha musqusha ee baahsan, laakiin dhammaantood waxay ku kacayaan lacag u dhow ama ka badan $ 100!
Waxaan go aansaday inaan tagi karo sariibad aan ku shaqeysto maalmo yar, waxaanan dareemay inay hubaal tahay inay yeelan doonto xulasho wanaagsan iyo waliba qiimo ka fiican;
Waxaan si dhakhso leh u helay qasabado kala duwan oo aan ka kala xusho iyada oo ka qiimo jaban tan aan ka helay bakhaaradayda hagaajinta guryaha ee xaafadda. Waxaan ku degay shirkan qasabadda, mana noqon karin mid faraxsan. Tuubbooyinka waxay leeyihiin nalikel qurxan oo qurux badan oo burush ah, wax walbana waxaa lagu daray rakibida, marka laga reebo labada tuubbooyin gaagaaban oo qaali ah oo loo baahan yahay si loogu xiro biyaha. Waxaan lahaa saaxiib igu caawiya dib-u-habeynta, oo ha ku rakibay qasabadaha. Si kastaba ha noqotee, waan hubaa inaan sameyn kari lahaa naftayda, maxaa yeelay waxaa jiray dhowr qaybood oo aan isugu imaanayay, tilmaamaha tusaalana waxay ahaayeen kuwo toosan oo aad u fudud in la fahmo lana raaco. Waxaan dhajinayaa sawirka sariigteyda cusub oo ay qasabadaha ku rakiban yihiin oo shaqeynayaan. Waxaan aad ugu boorrinayaa kulankaan balaadhinta qasabada musqusha shaqadiisa, naxaasta loo isticmaalo wax soo saarkeeda, quruxdeeda iyo waxa aan isleeyahay aad ayey muhiim u yihiin - waa sahlanaanta rakibida.
Astaamo kale oo ka mid ah isku-xidhka qasabadani waa "joojiyaha" saxanka. Waxay ku xirmaysaa adoo hoos u riixaya, waxayna ku fureysaa adigoo mar kale hoos u riixaya. Waxaan aaminsanahay inay tani tahay horumar weyn oo ka weyn tii hore ee joojiyaha, taasoo u baahneyd inaad isticmaasho kabaal si aad u furto una xirto. Waxaa laga yaabaa inaan ahay marka laga reebo, laakiin waligey ma aanan helin mid ka mid ah noocii hore ee aan cilladda ku dhicin. Xaqiiqdii, inta badan, waxaan is arkay anigoo gebi ahaanba iska tuuraya. Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan haysto, waxa aan u arko inay yihiin, joojiye aad u fiicnaaday. Tani waxay umuuqataa inay tahay wax yar oo horumar ah oo aan qiimo lahayn dadka qaar, laakiin kuwa naga mid ah ee wax ka qabtay dhibaatooyinkii joojiyaha hore, waa muuqaal soo dhaweyn ah.
Tayo wanaagsan qiimaha! Dhamaadku wuxuu umuuqdaa mid aad ufiican qasabaduna waxay u shaqeysaa sidii la rabay. Adeegga macaamilku waa fiican yahay, bullaacadda soo baxda ayaan u shaqeynin saxankeyga (oo aad u gaaban). Waxaan u diray emayl iibiyihii 10 daqiiqo gudahoodna waxay la yimaadeen go'aan. Waxay heleen god cusub oo dheereeya oo u dhigma dhammaadka / nashqadda qasabadda, ka dib waxay ii soo celiyeen lacag celin aan ku iibsado ta cusub. daadi.
Kuwani waa qaar ka mid ah qasabadaha ugu fiican ee aan iibsado, gaar ahaan barta qiimahan. Iyagu waa qurux badan yihiin, qurux badan yihiin oo quruxdooda uun ku dhex muuqdaan suuligayga cusub ee dib loo habeeyay. Waxaan adeegsaday qalab aad uga qaalisan oo loogu talagalay dib-u-habeynta dabaqa sare oo kani wuxuu u muuqdaa si aad u fiican. Si daacadnimo ah, waxay umuuqataa oo u shaqeysaa sidoo kale Moen ama Delta laakiin waa in ka badan 50% ka yar. AAD SIYAASAD BAN ugu talinayaa badeecadan.
Tuubadaani waa wax layaableh! Intii aan ku guda jiray dib-u-habeynta waxaan ku xushay dhowr qasabadood oo kala duwan CHROME musqusha iyo jikada. Caadi ahaan odhaahda aad heshay waxaad ku bixisay waxay u egtahay inay run tahay laakiin kiiskan maaha. Waxaan kuwaas ku haystay musqusha aniga oo maalin kasta isticmaalaya in ka badan 6 bilood hadda kuwani waa kuwa ugu badan ee aan jeclahay. Wax dhibaato ah kuma qabin daadashada, taabashada gacmaha, cadaadiska biyaha ama cabashooyinka kale ee caamka ah ee qasabadda leh. Jeeriga dushiisa leh qasabadani ma muujinayo baro biyo ah. Dhamaan qasabadaha kale waa in la nadiifiyaa dhowrkii maalmoodba mar si ay u sii ekaato mid cusub laakiin kan aan ahayn. Anigu macno ahaan waan tagi karaa laba toddobaad iyo badh anigoon tirtirin ama aanan xoqin xitaa ma sheegi kartid. Waxaan jeclahay qasabadahaan. Waxay la siman yihiin qashinkayga Qiimaha Qiimaha 'Pfister' marka la eego tayada laakiin iyagu waa tuubada kaliya ee sida fiican u muuqata markasta.
Waxaan ku badalay tuubada musqusha dhamaadka sare ta tan. Tuubbooyinka isku xira deg-degga ah waxay sameeyeen rakibidda neecaw runtiina aad baan ula dhacay tayada dhismaha iyo sida ay uga qurux badan tahay tan hore. Waxaan u maleynayay inaan fursad u helayo nooc aanan horey u maqal laakiin qiyaastii kala bar qiimaha waxa aan ku bixin lahaa bakhaar weyn oo qalabka lagu iibiyo tani waxay ahayd qiime aan caadi aheyn.
Waxaan ku jiraa kiro mana aanan dooneyn inaan ku qarash gareeyo tan bedelida laba qasabadood oo xun sayidkayga. Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay kuwan. Tayada ayaa ugu sareysa uguna fudud si loo rakibo. Sida had iyo jeerba, waxay qaadataa waqti ka dheer kuwii hore in la rakibo intii kuwa cusub lagu rakibayo… Sida caadiga ah waxaad ku dhibaatoodaa tayada marka aad raadineyso qiime. Waqtiga ayaa sheegi doona, laakiin illaa hadda kuwani waxay ahaayeen kuwo cajiib ah lacagta.
Badanaa waxaan kaliya ku isticmaalaa Qasabadaha Magaca Magaca Weyn ee Xaruntayada. Laakiin markaan arkay dib u eegista waxaan go'aansaday inaan isku dayo mid.
Aad baan ula dhacay tayada qasabada, iyo sahlanaanta rakibida. Qeybtu waxay dareemeysaa mid adag, oo si wanaagsan loo dhisay, iyo isku xirnaanta waxay ahaayeen xargaha birta ah.
qiimeeyay 4 out of 5
Jeclow qasabaddaan !! Tayo weyn qiimo weyn. Lagu hubiyey Lowe's isla tubadaasina waxay ahayd $ 119 midkiiba. Dhab ahaan waan kugula talinayaa!
Waxay ahayd in la helo qasabad cusub markii la sameynaayo musqusha yar yar. Jeclaaday muuqaalka qurxoon ee go'an. Waxaan u soo iibsaday sidii MATTE MADOW oo waxaan filayay dhawaq yar oo cawl laakiin tani waa mid aad u qurux badan. Qalabka intiisa kale ee musqusha waxay ku dhowdahay midabka cawlan laakiin waan la noolaan karaa tan. Dib-u-habeheena ayaa faallo ka bixiyay sida fudud ee rakibidu u ahayd. Tuubada waxay u shaqeysaa sidii la rabay sidaa darteed waan ku faraxsanahay qiimihiisuna wuu saxnaa.
Riigagyadan waxaa soo hindisay qof og waxa ay sameynayaan. Waxay ku leeyihiin shaabado korka ah ama goomayaal buur kasta dusheeda si looga ilaaliyo inay biyuhu soo dhacaan. Rakibaadda waa mid aad u fudud oo dhakhso leh. Qalabyadu waa kuwo tayo sare leh sidaa darteed kaliya uma muuqdaan kuwo wanaagsan laakiin ma miridhnaan doonaan.
Waxaan ka soo iibsaday qasabadeyda hore dukaanka qalabka guryaha maxaliga ah qiimo aad u badan, laakiin waxay socdeen in ka yar 3 sano. Kadib markaan u imid inaan ka qaado waxaan arkay lowska inuu ku dahaadhay waalka waana inaan jaray. Sida muuqata ma jirin shaabad wanaagsan hareeraha salka waalka iyo lowska waxaa laga sameeyay waxyaabo rakhiis ah oo miridhku ka baxo. Maadaama ay ku jirtay gudaha golaha wasiirada oo ay adagtahay in la helo, tani waxay qaadatay saacado.
Taasi waa sababta aan aad ugu faraxsanahay markaan arkay qaabka loo dhigay santuuqa iyo nooca ay u adeegsadeen dhismaha.
Tuubadaani waa mid hagaagsan! Jeclow sida ay umuuqato, fududahay in la rakibo, tayo culus oo culus. Faro malahan. Waan iska dukaameysanay laakiin ma dooneyno inaan ku bixino $ 100 sidaa darteed waxaan fursad ka helnay kuwan waana ku faraxsanahay inaan sameynay. Ma niyad jabi doontid.
Waxaan ku beddelay qasabaddii hore ee duugoobay tan. Aad ayaan ugu faraxsanahay! Waxay umuuqataa mid aad ufiican waxayna ahayd mid aad ufudud in lagu rakibo naftayda !! Waxaan qorsheynayaa inaan iibsado labo kale si aan u beddelo qasabadaha kale ee duugga ah.
Waxaan bedeleynaa shan qasabad oo musqusha ah oo ku kacaya laba jibbaar kuwan kuwan lagu kacay. Kuwani waa kuwo soo jiidasho leh, aadna u fudud in la rakibo oo si aad u wanaagsan ayaa loo sameeyaa. Waxa kaliya ee aan ku idhaahdo taasi si uun bey u xun tahay waa in tilmaamaha laguu sheego in aad soo iibsato xoogaa xirxiraha dunta tuubbada si aad ugu isticmaasho dunta tuubbada tuubbada. Dhuumaha bulaacada ayaa loogu talagalay saxanka oo leh dalool qulqulaya sidaa darteed waxaa jira godad dhinaca ka hooseeya joogsadaha, inta u dhexeysa lowska iyo goomaatada hoose. Mawduucyadu waa kuwo aad u wanaagsan waxaanan ogaaday in biyaha marka ay daadanayaan ay ka dhamaan doonaan godadka qulqulaya oo ay ku qulqulayaan dunta oo ay ka soo baxayaan lowska haysta tuubbada bulaacada. Waxaa lagu faray inaad isticmaasho tuubbada tuubbada halka dheecaanku ku xirmayo xagga sare ee saxanka, laakiin taasi ma aha halka ay ka soo baxday. Hel shaabad ku dheji dunta IMO, kuma khaldami kartid qasabaddan qiimaha ah!
Sidoo kale qiimuhu aad uma hoosayn qasabaddan aadka u wanaagsan, aad bay u fududdahay in la rakibo. Qulqulka qulqulka ayaa soo baxaya. Waxaan filayaa qasabadani inay sii socoto sanado. Tuubbada isbarbar dhiga ee tan oo kale ah oo ka sameysan leben weyn iyo hoobiye waxay ku kacaysaa 3 jeer inta ay ka gasho tuubadan. Waxaan aad ugu talinayaa oo hubaal waan iibsan lahaa markale.
Waxaan tan u iibsaday inaan ku beddelo qasabad 25 sano jirsatay. Rakiibintu waxay ahayd neecaw xitaa loogu talogalay rakibaye DIY ah oo aniga oo kale ah. Qaybta kaliya ee adkayd waxay ahayd ka saarista qasabaddii hore ee daxalaystay. Isku xirayaasha fudud ee la keenay waxay ka dhigeen rakibidda arrin gaar ahaan xanuun lahayn. Cabashada kaliya ayaa ah in qasabadu ka samaysan tahay walxo miisaan fudud marka la barbar dhigo tubada hore ee ay bedeshay. Si kastaba ha noqotee, badeecada la dhammeeyay waxay u egtahay mid jilicsan oo qurux badan.
Lagu rakibay qubays si dhif ah loo isticmaalo sidaa darteed khibrad nololeed ha ku lahaan laakiin xirmada ayaa ku dhameystiran waxaad u baahan tahay oo si fiican ayey u shaqeysaa, waxay umuuqataa mid wanaagsan Joojiyuhu waa riixid ah in la xiro aaladda halkii laga isticmaali lahaa usha caadiga ah si kor loogu qaado loona yareeyo istaajiyaha. Ma jecli taas laakiin xaqiiqadu way ka fududdahay oo waxay leedahay culeys ay ku jirto sidaa darteed haddii aad wax ku soo daadiso godka bullaacad waxaad u jiidi kartaa gabi ahaanba shirkii joojiyaha isla markaana waad la soo bixi kartaa. Taasi waxay u badan tahay in lagu daro marka loo eego diidmada ah inaadan haysan usha lagu furo ama lagu xiro joojiyaha.
Tuubadaani waxay umuuqataa oo sifiican uga shaqaysaa musqushayada. Rakibaadda waxay ahayd mid fudud oo hal shay lagu xuso. Tuubbooyinka dhaqso ee isku xira ee la socda qasabadda waa in si adag loo fariistaa markii la rakibay. Waxaan moodayay inay iyagu isku xirnaayeen okay laakiin markii biyaha la daaray oo qasabadu furmay, labaduba way go'een. Fudud fudud, kaliya xusuusnow inaad si adag u riixdid markii aad ku dhejineysid tubooyinka.
Waxaan arin yar kula yeeshay aerator-ka qasabada waxaanan ka helay adeegga macaamiisha ee WOWOW inuu yahay mid dhakhso badan oo jawaab celiya. Shirkad weyn, ayaa runtii kugula talin karta qasabaddan.
Kaliya tan waan helay oo rakibay. Waxay ahayd wax aad u fudud in la rakibo, baakad aad u fiican iyo qiime aad u wanaagsan. Waxaan aqriyay dib u eegisyo badan kahor intaanan iibsan oo aan macno samayn. Illaa iyo hadda wax daadad ah ma leh waxayna umuuqataa wax fiican. Haddii wax uun is beddelaan dib ayaan u qori doonaa dib-u-eegiddayda. Dheeraad ah, isla markii aan helay badeecada waxaan email ka helay iibiyaha. Waxay ku tiri haddii ay jiraan arrimo haba yaraatee aan toos ula xiriiro. Sidaan u idhi ilaa iyo hadda heer sare. Xusuusnow waa qiimo aad u fiican lacag.
Waan jecel nahay qasabadani. Furka badhanka riixida ee bullaacadu aad ayuu u fiican yahay. Gacan-ku-haynta ayaa si habsami leh u rogmaysa biyuhuna si weyn ayey u socdaan. Waxaan ugu iibsaday wadarta guud ee musqusha oo aan sameynayay waxaanan ka walwalayay inaan alaab noocaas ah ka iibsado khadka tooska ah anigoon dhab u arkin. Way dhaaftay filashadaydii. Waad ku mahadsan tahay badeecad aad u wanaagsan iyo khibrad weyn oo ku saabsan iibsigan.
Tuunbooyinka si fiican ayaa loo dhammeeyaa oo si fiican ayaa loo baakadeeyey. Spigot-ka waxaa loogu talagalay inay si wanaagsan udub dhexaad ugu noqoto weelka saxanka. Gasketing iyo rakibidda ka yar qasabadaha iyo spigot si fiican looga fikiray si looga hortago soo gelitaanka biyaha. Qalabka la isticmaalay wuxuu umuuqdaa mid tayo sare leh. Boodhka ka soo baxa bullaacadda iyo dabada, inkasta oo uusan u adkeyn sida loo beddelay, way ka badan yihiin kuwa ku filan. Rakiibintu ma adkaan oo waxaa ka mid ahaa qalabkii oo dhammaantood meesha ku sugnaa. Baakadaha waa ku fiican yihiin qasabad kasta iyo spigot shaqsiyan loo xirxiray sidaa darteedna xoqin ku socota transit ma aysan dhicin.
Runtii badeecad aad u wanaagsan ayaa ku jirtay Bakhaarka Guriga mana heli karin mid aan ka helay oo waxaan ka helay WOWOW $ 20 ka yar. Qalabku runtii wuu fududahay waxaanan rakibay dhawr waaskadood sannadihii la soo dhaafay tanina waxay ahayd midda ugu fudud. Wax walba waxay dareemeen inay aad u adag yihiin, runti waan jeclaaday bulaacadaas la timid taas oo aad uga wanaagsan kuwa ka soo jiidaya gadaasha tuubada. Waxaan heli doonaa mid kale markaan dib u habeyn ku sameeyo musqusha kale.
Iibsaday tan si aan ugu beddelo qasabaddayda hadda jirta ee daadanayay. Way fududahay in la rakibo. Waxay igu qaadatay illaa nus saac in aan soo saaro qasabaddii hore iyo ilaa 20 daqiiqo in aan ku rakibo tan cusub. Waxay sidoo kale la timaaddaa qulqulka qulqulka, kaas oo aan sidoo kale aad u jeclahay. Waxay u muuqdaan kuwo fiican. Ma hubo inta ay sii socon doonaan, laakiin waan ku faraxsanahay iibsashada hadda.
La iibiyey: 39
Qolka Musqusha Qubayska WOWOW Midab leh oo buluug ah
NALA SOO XIRIIR Cinwaanka Shiinaha: 119Th Berth, Dabaqa 1aad ee nambarka 21 Yanjiang East Wadada Shui Kou Town Kai Ping City Guang Dong Gobolka Shiinaha +86 19927601787 (9 am-18 pm GMT + 8) Emayl: sales@wowowfaucet.com
Xuquuqda daabacaadda © 2020-2025 WOWOW INC.
Ha moogaanin: Soo Iibso 1 1 10 XNUMX% ka baxsan ka qaadista